War - Shaandheynta FRP miyey dabooleysaa baahiyahaaga?
Mashiinka FRP waa nooc ka mid ah walxaha u eg saxanka oo leh meelo fara badan, kaas oo ka samaysan faybar galaas ah maaddo xoojinaysa, cusbi polyester ah oo aan qanacsanayn sida matrixka, iyo isku-dubarid gaar ah. Shabakadda FRP waxaa loo isticmaali karaa inay tahay qaab dhismeed. Waxaa loo isticmaalaa sida dabaqa, daboolka godka, geed biyoodka geedka degmada, sagxad, maraakiibta markabka, jaranjarada, wadada looxa, iwm. Daxalka u adkaysta, olol-retardant, ningax non-magnetic, midabo dhalaalaya, iyo qaabab kala duwan oo la kala xusho.
Materials Alaabta ceeriin oo tayo sare leh
1) Ciid macaan oo aan lahayn Alkali
2) Kalsiyam kaarboonayt tayo sare leh
3) Kaarboon-yar oo midabbo bey’adeed u fiican
4) cusbada Orto-phthalic
Shan farshaxan oo waaweyn
1) shabagga caadiga ah
2) Dareenka microporous
3) shabaggeedii barafoobay
4) shabaggeedii Transparent
5) shabaggeedii isku dhafan
1) U adkaysiga daxalka, miridhku ma jiro, cimri dherer adeeg iyo dayactir la’aan.
2) Miisaan fudud, xoog sare, fududahay in la jaro lana rakibo.
3) Olol-celin, dahaaran, aan ololayn karin oo aan magnetic lahayn.
4) Saamaynta iska caabinta, ma fududa in la qaabeeyo, lana yareeyo daalka.
5) Naqshadeynta waa mid xoogan, cabirku waa mid jajaban oo kaladuwan, cabirkiisuna waa xasilloon yahay.
6) Anti-skid wuxuu leeyahay dabacsanaan yar, wuxuu xoojiyaa raaxada wuxuuna hagaajiyaa waxtarka shaqada.
7) Qurux badan oo fudud in la ilaaliyo.
Qalabka wax lagu duubo ee FRP waxaa lagu sameeyaa iyadoo lagu mideeyo midabka midabka dabka oo dhan. Midabku waa noocyo badan yahay, midabeyntu waa isku mid, midabkuna waa dhalaalayaa, ma sahlana in la libdho, uma baahna rinji, kumana koobna dusha sida rinjiga oo kale. Waxay leedahay dusha siman oo ay ka buuxaan cusbi iyo qaab wareegsan. Dusha sare ee gudaha ayaa ka dhigaya cirifka inuu leeyahay saameyn is-nadiifin ah. Xitaa haddii ay wasakh tahay, si fudud ayaa loogu dhaqi karaa biyo ama saabuun, sidaa darteed dusha sare ee grille-ka ayaa u nadiif ah sida cusub.
8) Waxay leedahay faa iidooyin dhaqaale oo dhameystiran oo dhameystiran: qiimaha waxsoosaarka ee daloolka FRP waa 1.4-1.8 jeer tan birta birta ah, qiimaha rakibistuna waa 20-40% oo kaliya birta kaarboon. Qiimaha dayactirka ee shabagga FRP waa ku dhowaad eber. Shabakadda birta ah waxay u baahan tahay in la sii wado sannad kasta, kharashka dayactirka ee la uruuriyay wuxuu si aad ah uga badan yahay wadarta kharashka ku baxa shabakadda FRP. Inkasta oo qarashka maalgashiga bilowga ee shabagga FRP uu waxyar ka sarreeyaa kan birta, haddana wadarta faa iidada dhaqaale waa 4-5 jeer tan birta lagu xoqo. Tani sidoo kale waa mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee adeegsiga baaxadda leh ee daloolka FRP ee dibedda.